Ilinde i-oda kusuka China? Funda indlela ukulandelela izimpahla ku Aliexpress!
Bayanda emhlabeni wonke sizibophezele ukuthenga ezitolo inthanethi. Isizathu ukuthi izinzuzo eziningi ukuthenga ezinjalo, kodwa futhi kukhona nemibi. Ngokwesibonelo, ngokuvamile kakhulu abathengi of omunye izitolo inthanethi kunazo owaziwa uyabuza, "Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe ukulandelela izimpahla ku Aliexpress?», Noma kunalokho, ithumele kakade lelo phasela. Isihloko kuzosiza lokuba siliqonde.
Indlela ukulandelela izimpahla ezivela China
Kuthunyelwe kusuka China imikhiqizo ngaphambilini kusayithi Aliexpress, ungakwazi ukulandelela phansi omunye izigaba ezokuthutha ezimbili:
Lo mkhiqizo usuthunyelwe futhi isendaweni ensimini yase-China.
Lo mkhiqizo isivele wawela umngcele futhi kuleyo nsimu yeRussia.
Uyithola kanjani ukwaziswa okwengeziwe Kunoma yikuphi? Ikhasimende kuqala uzothola ngomlayezo lakho le-imeyili kusukela umdayisi izimpahla ziye kokuthunyelwa. Ngokuvamile okulungiselelwa izinsuku 2-5 emva obeka oda, kodwa esitolo evumela osomabhizinisi Chinese ukucabanga kufikela kuzinsuku ezingu-10.
Ngisho noma incwadi engakaze wathola kule nkathi, ulwazi olwengeziwe mayelana nendlela ukulandelela izimpahla kwi Aliexpress, etholwe ngokwenza izinyathelo ezilandelayo:
Faka iKhabhinethi wakho siqu.
Khetha intwana "imininingwane isibonisi".
inombolo Kopisha ku ithebhu evuliwe.
Kukopishelwe umphumela ikhodi kwamanani futhi ncwadi okuthiwa Tracker ukuze, lapho ijoyina kumuntu futhi iphasela ethile.
Indlela ukulandelela Tracker phasela?
Uma isicelo okunikezwe ithrekhi othize, ungakwazi kalula ukuthola indlela ukugcina umkhondo izinto Aliexpress ngenombolo. Ukudlulisa ulwazi kwi-oda ithebhu, lapho ungabona inombolo iphasela, futhi baxhumana ulwazi kwi website ngokuchofoza okuyinto ungakwazi ukuthola lapho izimpahla ngaphambilini.
Kubalulekile ukwazi ukuthi, ngisho nangemva kokuthola incwadi echaza ukuthi leli phasela endleleni, kodwa akawatholanga inombolo ithrekhi ulwazi ukuze, ungaqiniseka ukuthi iphutha. Kulokhu, kubalulekile ukuba uxhumane nomthengisi. Ulwazi mayelana lingatholakala ekhasini elilodwa, lapho ithrekhi. Iningi bacabange abahlinzeki Fide abagcina ukuhamba iphasela ngamandla size sidlule amasiko. Ngalolo indawo isimo iphasela usukela kalula.
Kunezimo lapho umdayisi ayinikeli ulwazi ngaphandle izinombolo. Indlela ukulandelela izimpahla ku Aliexpress kulesi simo? Ungazama ukuhlola isimo oda ngo-ChinaMail indawo eyodwa, faka inombolo ithrekhi kunombolo ensimini. Elinye isu ngokuba Kulokhu: zonke amaphasela, ithrekhi okuyinto iphela ngesikhathi SG, kungenziwa zilandelwa phezu Singapore ikheli lesayithi.
Indawo amaphasela kokuthunyelwe China
Ulwazi mayelana indawo iphasela ensimini ka China, ngokuvamile kanje: isimo salo kusethelwe ku- "Ukuhamba babelinde ezweni uya khona." Nokho, lapho izimpahla ukudlula amasiko imvume, kuyothiwa ohlwini "akhishelwe khona" futhi uzobona ngaphezulu kangaka, "landizela ezweni uya khona."
Ngokwesilinganiso, kusukela isimo eyodwa kuya kwenye ngizodabula izinsuku 25, kodwa zikhona ezehlukile, lapho kufika lesi sikhathi kungase kube njengoba eliphezulu izinsuku 40-45. Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela ukulandelela izimpahla ku Aliexpress, futhi babone isimo ukuhambisana indawo ethize ye-oda, ungaqiniseka izimpahla kuyisikhathi eside elindelwe Vending kusuka esitolo inthanethi owaziwa.
Indawo amaphasela kumeyili Russian
sekudlule Ngakho amasiko, kanye oda ensimini ka ezweni lethu. Futhi manje kanjani ukulandelela izimpahla posted on Aliexpress? mail Russian ngoba enikeza yonke imininingwane kwi website yayo. Yonke imithombo ekhona njengamanje inthanethi ezinikeza ulwazi lokulandelela ukuthatha ikheli site. Nokho, ziyisici abasizi ukukhansela esimweni amaphasela eziningana: udinga nje ukopishe inombolo zisetshenziselwe ukuba ngezamaphoyisa. Russian Mail manje inikeza akhathazayo ngaphezulu inqubo ithrekhi.
Okufanele ukwenze kutholakale untracked?
Kunezimo lapho izimpahla ingengaakwazi. Isizathu 2:
Kuye nokho kwaba izinsuku ezingu-10 kusukela isikhashana lapho Umyalelo lo ukhishwe.
Esimweni sokuqala badinga kuphela ulinde kancane ke esimweni sesibili njengoba ithrekhi lapho izimpahla ukuze Aliexpress? Ikhambi best kungaba ukubhala umlayezo umphakeli ukuthi inombolo yokulandelela ayivumelekile. Uma esinye isenzo esenziwa Umthengisi engalandeli zingakapheli izinsuku 5, ungavula ngokuphepha ingxabano. Khona-ke kuyodingeka ukunikeza ulwazi ngabe iphasela, yimalini umthengi ufuna zibuyiselwe wathola.
Umbango futhi evulekile uma kwenzeka ukuthi i-oda has awunankinga inombolo ithrekhi, kodwa ayilethiwe. Kukhona ayisekho ngakho kubalulekile ukuba baqonde indlela ukulandelela izimpahla ku Aliexpress. Thumela Russian - yilokhu okudingayo ukuze uqonde, ngenxa yomsebenzi wakhe kuvamile kakhulu amanga anjalo.
Kulokhu futhi, kubaluleke kakhulu ukuba silandele kokuphela lokuvala othomathikhi kuthengiselana phakathi nomthengisi kanye umthengi, usuku isethwe ngemva kokumukisa umphakeli izimpahla. Umbango angavulwa kuphela isikhathi kuze imigomo abavumelekile, kungenjalo imali ngeke adluliselwe umdayisi, ngisho izimpahla undelivered.
Ubuhlobo Umbango emkhatsini lamacele kuthengiselana okufanele ixazululwe ngokushesha phakathi nesikhathi esifushane - izinsuku 5. Kungenjalo, imali imali eceliwe umthengi izobuyiselwa kuye.
Ungangehlisela itekisi mina ...
Ukuphrinta amakhadi njengebhizinisi
Ukulethwa service ngoba abathengisi inthanethi Dalli Service - sizikhandle, ngokushesha, iyatholakala
Impilo eshalofini we iphasela ngesikhathi Russian mail futhi iphasela kokulandela
Formic acid, acetic acid
Kanjani ukubala umthamo wezimpahla nokuthi ukukhetha imoto nezinto zokuhamba?
Lapho bamfuna isizathu esenza ukuthi umntwana usuke engakabi ukudla
Isimo kanye nokubaluleka: igama Nastasia
Okuhle mhlophe wokuxubha (ngokuvumelana odokotela bamazinyo kanye abathengi)
BMW GT 3: ukubuyekezwa, Ukucaciswa, amanani (isithombe)
Rococo (efekethisiwe) Wabasaqalayo: izikimu kanye namathiphu
Attractive Chiron: ukubuyekezwa kanye izici
UJean-Jacques Annot: ifilimu, i-biography, isithombe
Torakalgiya - kuyini? Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa torakalgii
Hoarseness. Ukwelashwa futhi kungenzeka izingozi
Ukhula Dyer sika emhlabeni zasendulo nezanamuhla
Afanayo - a ... A isethulo esifushane isihloko